Antony 10 lehibe hananganana tranokalanao amin'ny WordPress | Martech Zone
Miaraka amin'ny orinasa vaovao dia vonona hiditra amin'ny tsena ianareo rehetra fa misy zavatra iray tsy ampy, tranonkala iray. Ny orinasa dia afaka manasongadina ny marika misy azy ireo ary mampiseho haingana ny lanjan'izy ireo amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny tranonkala iray manintona.
Ny fananana tranokala mahafinaritra sy manintona dia tsy maintsy ilaina amin'izao fotoana izao. Fa inona avy ireo safidy hananganana tranokala? Raha mpandraharaha ianao na te hanangana ny app anao voalohany amin'izay WordPress dia zavatra iray izay afaka mahavita ny takinao amin'ny fomba mahomby.
Andao hojerentsika ireto antony 10 manaraka ireto izay antony maha-zava-dehibe ny WordPress mba hiainan'ny orinasanao eto amin'ity tsena miovaova ity.
Amboary ny tranokalanao amin'ny WordPress amin'ny fomba mahomby - Maimaimpoana tanteraka ny WordPress. Eny! marina izany. Tsy maninona na tranokala ara-barotra no tadiavinao na mila faritra famoahana bilaogy manokana ianao, ny tena izy dia tsy mandray fiampangana fanampiny na miafina i WordPress. Etsy ankilany, WordPress dia fizotran'ny loharano misokatra izay ahafahanao manatsara na manova ny kaody loharano izay midika fa afaka manamboatra mora foana ny fijery na ny fiasan'ny tranonkalanao ianao.
Interface ho an'ny mpampiasa - WordPress dia noforonina tamin'ny fomba mora izay manampy ny olona teknika sy tsy teknika rehetra. Io no antony lehibe ao ambadiky ny fangatahana goavambe ho an'ny WordPress eran'izao tontolo izao. Etsy ankilany, WordPress dia mora ampiasaina ary mamela ny mpampiasa hamorona pejy web, lahatsoratra, menus ao anaty fe-potoana kely ihany koa izy io. Azonao atao ny milaza fa manamora ny asan'ny olona izany.
Mora ny misintona lohahevitra sy plugins maimaim-poana - Efa niresaka izahay fa amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny WordPress dia afaka mamorona tranokalanao amin'ny fomba lafo vidy ianao. Ankoatr'izay, raha tsy manana kinova premium an'ny WordPress ianao, aza matahotra, eto misy lohahevitra sy plugins maimaim-poana an-jatony izay azonao sintonina mora foana ho an'ny tranonkalanao. Raha mahita lohahevitra mety ianao maimaim-poana dia afaka mitahiry dolara an-jatony ianao.
WordPress dia afaka mizatra mora foana - Mba hananganana tranokala mahomby dia mila mividy sehatra sy fampiantranoana ianao. Ny saran'ny fampiantranoana dia $ 5 isam-bolana raha manodidina ny $ 10 isan-taona ny vidin'ny anarana iray. Amin'ny ankapobeny, WordPress dia afaka mampitombo ny filanao ara-barotra ka tsy handoa vola izany rehefa tonga amin'ny fifamoivoizana ampy na te hanitatra ny tranonkalanao ianao. Toa ny fividianana lalao video izany. Rehefa manana izany ianao dia tsy misy mahasakana anao hampiasa azy.
Vonona ny hampiasa - Aorian'ny fametrahana WordPress dia afaka manomboka ny asanao avy hatrany ianao. Tsy mila fanahafana izany, ankoatr'izay dia azonao atao tsara ny manamboatra ny lohahevitrao, ary koa afaka mampiasa plug-in mety ianao. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia mitady fametrahana mora ianao izay afaka mandrindra ny fahana amin'ny media sosialy, hevitra, sns.
Manatsara hatrany ny WordPress - Ny fanavaozana matetika dia tsy natao ho an'ny tanjona fiarovana ihany; manome tsy tapaka ireo fiasa mandroso izy ireo izay mahatonga ny sehatra ho tsara kokoa ho an'ny mpampiasa rehetra. Ankoatr'izay, ny ekipa manam-pahaizana momba ny mpamorona dia manavao plug-in vaovao sy hafa hampiaiky volana ny mpampiasa. Isan-taona izy ireo dia nampiditra endrika manokana ary mamela ny mpampiasa hijery azy io.
Karazana haino aman-jery marobe - Ny olon-drehetra dia te-hampanan-karena ny votoatin'ny tranokalany. Ary maniry hampiditra fampahalalana bebe kokoa amin'ny pejy "momba anay" ianao. Lasa manintona kokoa ny tranokala iray raha toa ka misy horonan-tsary mahaliana na galeri-tsary. Eny! Manome anao safidy ny WordPress hampiditra ireo tsy misy fotony amin'ny fomba manaitra. Mila misintona sy mandatsaka sary ianao na afaka mandika-mampiditra ny rohy amin'ny horonan-tsarinao voafantina ary hiseho ao anatin'ny fe-potoana kely dia kely izany. Ankoatr'izay dia azonao atao ny mampiditra karazana rakitra isan-karazany, toy ny .mov, .mpg, mp3, .mp4, .m4a.3gp, .ogv, .avi, .wav, .mov, .mpg ankoatry ny hafa. Manome anao fahalalahana mampakatra izay tianao tsy misy fetra.
Avoahy ao anatin'ny fotoana fohy ny atiny - Raha te hamoaka ny lahatsoratrao amin'ny fomba haingana ianao dia tokony WordPress no vahaolana tokana anao. Amin'ny tsindry vitsivitsy amin'ny totozyo dia azonao atao ny mamoaka majika ny atiny. Ankoatr'izay, raha manana ny fampiharana ny WordPress amin'ny findainao ianao dia azonao atao ny mamoaka ny lahatsoratrao na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra.
Manana fisavoritahana amin'ny kaody HTML? - HTML tsy kapoakan'ny dite rehetra. Saingy manome anao sehatra i WordPress ahafahanao mampakatra ny hafatrao raha tsy misy ny fanohanan'ny HTML. Midika izany fa afaka mamorona pejy ianao ary mitazona ireo hafatrao mahazatra nefa tsy manana fahalalana HTML.
Milamina sy azo itokisana koa izy ity - Tsy isalasalana fa WordPress dia sehatra fampandrosoana tranonkala matanjaka izay mitantana ny olan'ny fiarovana anao koa. Manasongadina ny fanavaozana tsy tapaka sy ny fiarovana ny tranokala izay mitazona tontolo azo antoka ho anao ny WordPress. Amin'ny alàlan'ny fisorohana mialoha dia azonao atao ny mitantana ny tranokalanao WordPress mora foana amin'ny hacking.
Araky ny fantatrao, WordPress dia tranokala manokana na ara-barotra. Mamaha am-pahamendrehana ny fizotran'ny fitantanana atiny anao ary mamela anao hanana fahalalahana mamoaka tsy misy fetra. Raha te hanangana ny tranonkalanao ianao ary tsy manana vola ampy hananganana azy dia WordPress no ho vahaolana tokana anao. Azonao atao ny mamorona tranokalanao amin'ny fomba mahomby. Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia hanome anao hevitra momba ny tombontsoa sy ny maha-zava-dehibe ny WordPress amin'ity tsena miovaova ity.
Tags: Content Marketingmpamoaka lahatsoratraHTMLkarazana haino aman-jeryPluginsvonona hampiasaazo antokaambaratongafiarovanalohahevitrainterface tsara ho an'ny mpampiasaWordPress